Mas'uul Katirsanaa Wasaarada Waxbarashada DF-ka oo Ku Dhintay Qarax Gaarigiisa loogu Xiray.
Monday April 10, 2017 - 10:16:14 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxa maanta barqadii ka dhacay mid kamida xaafadaha ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho.
Qarax ayaa haleelay gaari nuuca raaxada ah oo uu watay sarkaal katirsanaa wasaaradad Waxbarashada Dowladda Federaalka.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in gaarigu uu qarxay xilli uu marayay kasoo horjeedka isbitaalka Ciidanka Naafada Martiin ee degmada Xamarweyne waxaana ku dhintay C/qaadir Cismaan Faarax oo loo yaqaan Dr Yare kaasi oo kamid ahaa mas’uuliyiinta wasaaradda Waxbarashada.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in C/qaadir Cismaan uu u dhintay dhaawac culus oo kasoo gaaray qaraxa waxaana go’ay labada lugood ee jirkiisa.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in burbur xooggan uu gaaray gaariga qaraxu haleelay, qaraxyada lagu dhajiyo gaadiidka ay isticmaalaan Saraakiisha DF-ka ayaa bilihii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa ah midkii 2-aad ee ka dhaca Muqdisho 5 Maalmood Kadib markii uu Farmaajo dagaal ku cilaamiyaya Xarakada Al Shabaab.
Shalay ayay aheyd markii isku day dil uu ka badbaaday Jeneraal Cirfiid oo ah taliyaha guud ee ciidanka melleteriga Dowladda Federaalka kaasi oo loo xil saaray in uu agaasimo dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.